Uluphi Ulawulo LukaThixo? Inkcazo yeBhayibhile
Fumana Oko Kukho Ulawulo LukaThixo Lwenene
Ubukhosi bubonisa ukuba uThixo, njengombusi wehlabathi, ukhululekile kwaye unelungelo lokwenza nantoni na ayifunayo. Akabophelwa okanye angagqithwanga ngumyalelo wendalo yakhe. Ukongezelela, ulawulo olupheleleyo phezu kwayo yonke into eyenzeka apha eMhlabeni. Intando kaThixo yimbangela yokugqibela yezinto zonke.
Ubukhosi buvame ukubonakaliswa ngolwimi lobukumkani: UThixo ulawula kwaye ulawula phezu kwehlabathi lonke.
Akakwazi ukuchasana. UyiNkosi yezulu nomhlaba. Ubekwe esihlalweni sobukhosi, kwaye itrone yakhe ifanekisela ulongamo lwakhe. Intando kaThixo iphakamileyo.
Ulongamo lukaThixo luxhaswa kwiindinyana ezininzi zeBhayibhile , phakathi kwazo:
Isaya 46: 9-11
NdinguThixo, akukho namnye; NdinguThixo, akukho namnye onjengaye. Ndiyazisa ukuphela kwasekuqaleni, kumaxesha amandulo, oko kuza kuza. Ndithi, 'Injongo yam iyakuma, kwaye ndiya kwenza konke endikukholisayo.' ... Into endiyithethile, ukuba ndiyizise; oko ndicwangcisile, ukuba ndiya kwenza. ( NIV )
INdumiso 115: 3
UThixo wethu usezulwini; wenza nantoni na emkholisayo. (NIV)
Zonke izizwana zomhlaba zithathwa njengento. Wenza njengoko ethanda ngamagunya asezulwini nezizwe zomhlaba. Akukho mntu unokubamba isandla sakhe okanye athi kuye: "Wenze ntoni na?" (NIV)
Kodwa ungubani, umntu, ukuthetha kuThixo? "Ngaba into eyakhelweyo ithi kumntu owawumbumbayo, 'Kutheni undenzele oku?'" (NIV)
Ukhokelo lukaThixo luyisikhubekiso sabakholelwa kuThixo nabangakholwayo, abafuna ukuba ukuba uThixo ulawula ngokupheleleyo, ukuba uphelise konke ububi nokubandezeleka kwehlabathi. Impendulo yomKristu kukuba ingqondo yomntu ayikwazi ukuqonda isizathu sokuba uThixo avumele ububi; Kunoko, sibizwa ukuba sibe nokholo kuThixo nokulunga.
Ubukhosi bukaThixo buphakamisa iPuzz
Iphasethi yemfundiso yenkolo iphakanyiswa ngulo longamo lukaThixo. Ukuba uThixo uyayilawula yonke into, abantu bangaba njani inkululeko yokuzikhethela? Kubonakala ngokucacileyo kwiZibhalo nakubomi abantu abanakho ukuzikhethela. Senza ukhetho oluhle nolungendawo. Nangona kunjalo, uMoya oyiNgcwele ukhuthaza intliziyo yomntu ukuba akhethe uThixo, ukhetho olungileyo. Kwimizekelo kaKumkani uDavide kunye noMpostile uPawulos , uThixo usebenza kunye nokukhetha okubi kwabantu ukuguqula ubomi.
Inyaniso embi kukuba abantu abanesono abafanelwe nto kuThixo oyingcwele . Asikwazi ukuphatha uThixo ngomthandazo . Asinakulindela ubomi obutyebi, obungenabuhlungu, njengokuba iindaba ezilungileyo . Kwakungekho nathi esinokulindela ukufikelela ezulwini kuba "ngumntu olungileyo." UYesu Kristu usinikezelwe njengendlela eya ezulwini . (Yohane 14: 6)
Inxalenye yolawulo lukaThixo kukuba, nangona singenakufaneleka, ukhetha ukuthanda nokusisindisa. Unika wonke umntu inkululeko yokwamkela okanye yokugatya uthando lwakhe.
Ukubizwa: I- SOV ur un tee
Umzekelo: Ulongamo lukaThixo alukwazi ukuqonda abantu.
(Imithombo: carm.org, gotquestions.org kunye ne-albatrus.org.)
Iindaba eziqhakamshelweyo malunga neekomkomini zaseLwandle